PTZOptics dia mamoaka Joystick Controller vaovao | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » PTZOptics dia mamoaka Joystick Controller vaovao
Downingtown, PA - 17 Febroary 2021 - PTZOptics, mpanamboatra mpamokatra fakantsary robotic kalitaon'ny haino aman-jery, dia manambara ny famoahana ny PT-SuperJoy-G1 Joystick Controller, vahaolana feno manohana ny fakan-tsary sy serial mifototra amin'ny tambajotra. Ny SuperJoy dia mametraka fifehezana famokarana multicamera be pitsiny eo am-pelatanan'ny mpampiasa ny haavon'ny fahaizany. Ny mpampiasa dia hanana fanaraha-maso asongadiny amin'ny fakantsary PTZOptics na HuddleCamHD, ary koa ny fifehezana ny Sony, Birddog, Newtek, ary fakan-tsary PTZ hafa ho an'ny fikirana voafantina.
"Tsy misy tranga fampiasana diso an'ny SuperJoy," hoy i Matt Davis, Lead Engineer ao amin'ny PTZOptics. “Namboarinay ity lokom-pifaliana ity mba 'hilalaovanay tsara' miaraka amin'ireo fananganana efa misy an'ny mpampiasa. Izahay dia manandrana manao azy ho manerana izao tontolo izao, hiasa amin'ny fitaovana maro araka izay azo atao. Na inona na inona fampiasanao azy dia tena tokony hifanaraka amin'ilay scenario ilay izy. ”
Preset bokotra preset sy fanitsiana eny an-dalambe
Ny SuperJoy dia azo alamina fandaharana miaraka amin'ny preset fakan-tsary hatramin'ny 255 PTZ, ao anatin'izany ny “preset haingana” 9. Ny mpampiasa dia afaka mamorona vondrona fakan-tsary fakan-tsary hatramin'ny efatra mamela azy ireo hanova seho mora foana ihany koa. Ny bokotra efatra an'ny SuperJoy izay azo namboarina dia azo alamina hamoronana “preset super” izay mihoatra ny fakan-tsary, mandefa baiko manokana amin'ny alàlan'ny HTTP, UART, TCP na UDP amin'ireo fitaovana miorina amin'ny tamba-jotra, anisan'izany ny jiro, mpandahateny ary fampisehoana. Saika ny fitaovana rehetra azo fehezina amin'ny IP dia nateraky ny SuperJoy.
Ny SuperJoy dia manolotra fifehezana lavitra mihoatra ny toerana misy ny fakantsary sy ny zoom. Amin'ny fampiasana bokotra fanampiny, ny mpandraharaha dia afaka manitsy ny hafainganam-pandeha, ny fitongilanana, ny zoom, ary ny hafainganam-pandeha mialoha. Ny SuperJoy koa dia manana bokotra hanaovana fanitsiana isa-minitra mba hametahana, hifantohana, fanovana iris / shutter ary tombony mena sy manga. Ity fahefana manara-penitra ity dia voalanjalanja amin'ny alàlan'ny fahaizana mametraka arofanina amin'ny fanaraha-maso misy. Ny "mode basic" namboarina dia mampitsahatra ny fifehezana hafa ankoatry ny fifehezana sy presetan'ny fakan-tsary tokana, fa ny "matrix mode" kosa dia manome ny mpampiasa fahafaha-miantso preset hatramin'ny fakan-tsary telo. Na inona na inona ny maody, manazava ny bokotra misy an'ny mpampiasa ilay SuperJoy. Ny maody fototra sy matrix dia mamela ny mpilatsaka an-tsitrapo sy ny mpampiasa vao mandray anjara amin'ny famokarana horonan-tsary nefa tsy matahotra ny hanao fahadisoana.
Miovaova, mahery, azo idirana
Azo atao izao ny manafatra $ 989 US MSRP, ny SuperJoy dia natao hiresahana karazana fampiharana, haben'ny famokarana ary fahaiza-manao. Miaraka amin'ny preset marobe sy ny fahaiza-mandanjalanja tsara, io vahaolana io dia afaka mitondra na dia ny famokarana multicamera sarotra indrindra aza. Ny SuperJoy dia misy fiantohana voafetra maharitra 2 taona ary efa misy mialoha ny famandrihana. Ho an'ny famaritana ny vokatra sy ny fampahalalana bebe kokoa, tsidiho ptzoptics.com/superjoy/.
PTZOptics dia mpanamboatra robotic robotic, tilt, vahaolana fakan-tsary ho an'ny karazana fampiharana haino aman-jery, anisan'izany ny famokarana horonantsary sy ny streaming mivantana. Niorina tamin'ny 2014, ny PTZOptics dia nanakorontana ny indostria audiovisual matihanina rehefa nisy vondrona injeniera avy amina orinasan-tseraseran'ny rafitra iray hajaina indrindra namorona ny voalohany tao amin'ny portfolio-n'ny fakantsary izay ampahany tamin'ny vinan'izy ireo hamoronana "antsy miaramila Swiss" ho an'ny filana sarotra amin'ny fandefasana seho. Ny foiben-toerany any Downingtown, Pa., Dia nanala haingana ireo marika marika lehibe indrindra amin'ny sokajy fakantsary PTZ mihombo ny fanombohana. Miaraka amin'ny fanaparitahana manerantany any amin'ny firenena maherin'ny 50, namokatra loharanon-karena mitarika indostrialy ny PTZOptics, ao anatin'izany ny andiany mivantana StreamGeeks. Paul Richards an'ny PTZOptics dia nanoratra boky mpikaroka momba ny lohahevitra mafana amin'ny indostria, toy ny "Helping your Church Live Stream" sy "Esports in Education." Ny ekipany koa dia mamokatra ny Worship Summit Live isan-telovolana, izay manangona mpitarika fiangonana sy mpilatsaka an-tsitrapo an'arivony manerana an'izao tontolo izao. PTZOptics dia orinasa mpiray tampo amin'i HuddleCamHD, mpanamboatra fakantsary fakana horonantsary matihanina. Mianara bebe kokoa amin'ny www.zptrans.com.
Manamboninahitra ambony at PTZOptics
Paul Richards no Chief Streaming Officer ho an'ny PTZOptics. I Richards no mpanoratra ny Helping Your Church Live Stream, Esports in Education, ny Accelerated Broadcast Club Curriculum, ary ireo boky aman-gazety mivantana mifandraika amin'ny streaming.
Lahatsoratra farany nataon'i Paul Richards (jereo rehetra)
PTZOptics dia mamoaka Joystick Controller vaovao - Febroary 18, 2021
Atsaharo ny fahafahanao mivantana mivantana miaraka amin'ny Summit StreamGeeks - Novambra 25, 2020
Boky fitarihana mivantana mivantana sy famokarana horonantsary navoaka mba hanampiana ireo amateurs hahazo ny fahaizan'ny Studio-Level - Oktobra 2, 2020
Previous: Mamelombelona ny Andron'i Aostralia amin'ny lavitra
Next: 2020 Fahitalavitra fararano sy andian-tsarimihetsika miankina amin'ny Blackmagic Design